Barnaa­mijyo aad isku hawli karto muddada aad go’aanka sugeyso - Migrationsverket
Barnaa­mijyo aad isku hawli karto muddada aad go’aanka sugeyso
Aktiviteter medan du väntar på beslut – somaliska
Magengelyedoon ahaan waxaad ka qaybgeli kartaa barnaamijyo kala duwan si aad u bilowdo barashada afka iswiidhishka, u hesho aqoon ku saabsan bulshada Iswiidhan iyo suuqa shaqada ama aad u wanaajiso caafimaadkaaga.
Waxaa jiro ururo badan oo abaabulaan barnaamijyad loogu talagalay adiga oo magangelyodoonka ah. Waxaa xita jiro hayado waxbarasho iyo iskuulada dadweynaha dadka ku martiqaadi waxbarasho koox ahaan loo dhigto ama koorso barashada luqada iswiidhishka iyo warbixin ku saabsan mushtamaca. Barnaamijada ey suubiyan hayadaha, ururrada waxbarashada iyo iskuulaadka dadweynaha waxey kamid tahay kaalmeynta dadka magangelyodoonka oo waxaa lagu magacaaba Kalkaalada hore ee magangelyo-doonka [Tidiga insatser för asylsökande] (TIA). Ka qaybgalka barnaamijyada waa bilaash haddii aad tustid kaarkaada oo LMA. Waa suurtagal in Hay’adda socdaalka bixiso kharashka safarka xaaladaha qaarkood.
Haddii aad dooneysid inaa ka qeybgashid koox waxbarasho, koorso ama dhaqdhaqaaq kale oo kamid ah kaalmeynta Kalkaalada hore ee magangelyo-doonka waxaad la xiriirta hay’aad waxbarasho, iskuulka dadweynaha ama ururada samafalka oo meesha aad ku nooshahay laga helo.
Websaydhka https://www.informationsverige.se/so/aktiviteter-i-sverige/ waxaad ka arki kartaa barnaamijyo badan oo ka mid ah Kalkaalada hore ee magangelyodoonka ee laga helo halka aad ku nooshahay.
Inta ka akhriso warbixin ku saabsan kharashka safarka
Wuxuu khuseeyaa qofka carruurta ah ee codsanaya magangelyo